पछुताउने गरी दशैं नमनाऔँ, स्वास्थ्यको यसरी ख्याल गर्नुहोस् : डा अरुण उप्रेती
डा अरुण उप्रेती
शुक्रबार असोज १०, २०७६/ Friday 09-27-19
हामी सानो छँदा आलु काउली, मासु, चिउरा, पुलाउ खान पाइने लोभमा हामी दशैंको बेलामा टाढा टाढाको नाता लाग्ने मानिसहरुको घरमा गइन्थ्यो । अहिले चाहिँ ठूलालाई सबै ठाउँमा नयाँ लुगाप्रतिको मोह कम भए पनि दशैंमा नातागोता साथीहरु सँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अहिले झन बढदै गएको छ । यो राम्रो सामाजिक पक्ष हो ।अहिले कतिपय वयस्कलाई उच्चरक्तचाप, मधुमेह आदि भएको छ त्यस्तो मान्छेले त दशैंको बेला जिब्रोलाई लगाम नै दिनुपर्छ । तर प्राय यस्ता मानिसहरूलाई पनि दशैंमा खानको लोभ रोक्न गाह्रो हुन्छ । एकछिन खान त रमाइलो नै हुन्छ । तर स्वास्थको पनि ध्यान दिनु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ बेवास्ता गरिन्छ । एक गाँस “कम खानु यो खास गाह्रो कुरा त होइन, स्वास्थ्य समस्यापरेका तर मानिसललाई कोचेर खाँदा त वित्यास नै पर्छ ।”
दशैंको बेलामा मासु त जोडिएको नै हुन्छ । “दशैंमा मासु भात नखाए के दशैं” भन्ने सोच प्राय हुन्छ । पहिले पहिले मासु खान शायद चाड पर्व नै पखर्नु पर्ने हुनाले यसो भनिएको हो कि ?हुन त अहिलेको बेलामा मासु खान दशैं नै पर्खन त पर्दैन तै पनि विशेष गरी तिहार र दशैंका बेलामा मासु भात, मासु चिउरा, मासुका अनेक परिकारहरुसँगै मसालेदार र तेल घिउले लदबद भएको खानेकुरा घरघरमा नै खाइन्छ । कति गाउँ ठाउँमा मासुभात खानको लागि पहिलेदेखि नै खसी बोको, सुगुर आदि पालेर राखेको हुन्छ । यो बेलामा समुदायमा खसी बोको, सुगुर मिलेर पनि काटिन्छ, बेसगरी खाइन्छ । तर यसरी धेरै मासु र खाना खाँदा हामीले कति स्वस्थ भोजन गर्दछौं, सोच्ने बेला भएको छ ।
दशैं तिहार र अन्य धेरै संस्कृति, धार्मिक चाडपर्वलाई परिवार र साथीहरुसँग मिलेर मनाउनाले हाम्रो जीवनमा धेरै नै सकारात्मक भुमिका खेल्छ । दशैं तिहारको बेला गाउँ घरमा कति जना वर्षभरि बाहिर काम गरेर घर फर्किन्छन् । इद र क्रिसमस मान्नेहरु आफ्नो धार्मिक दिवस पनि त्यसैगरी पारिवारिक जमघट गरेर रमाइलो गर्छन् । प्रत्येक चाडले मानव मनमा खुसी ल्याउछ, सम्बन्धहरु नजिक पार्छ, वातावरण रमाइलो पार्छ । यसले गर्दा स्वास्थ्यमा पनि विशेष गरी मानसिक स्वास्थ्यमा त झन प्रभाव पर्छ ।
तर यो रमाइलोको बेलामा यदि खानपिनमा (विशेष गरी विभिन्न स्वास्थ्य समस्या भएका बयस्क वा बूढाबूढीहरुले) खान पिनमा ध्यान राखेनन् भने त दशैं र चाडपर्व सिद्धिने बित्तिकै अनेक स्वास्थ्य समस्या भएर डाक्टर, अस्पताल, औषधि आदिको पछि लाग्नुपर्छ । “दशैंमा मनाइएको आनन्द अहिले निस्किरहेछ । के गरौं, मासु देखेपछि स्वादिष्ट तरकारी खाँदा हात र मुख थाम्न सकिन्न, कसैको घरमा तास खेल्न गयो भने भुटेको मासु र चिउरा दिंदा नाइँ भन्न सकिन्न । कतिले भन्छन्, तर “एक छिन नाइँ” भन्न नसकेपछि दशैंको बेलाको मासु र चिउरा, पुलाउ, मासु र भात धेरै खाएर रक्तचाप बढेर, मधुमेह भएकाहरुको त रगतमा चिनी बढेर समस्या परेपछि र बाथको समस्याले गाँजेपछि र खुट्टा र हातका हड्डीहरु धमाधम दुख्न थालेपछि “अति बढी नै खाइएछ कि क्या हो” भन्ने लाग्छ । तर खाएर शरीरको रगतमा गइसकेपछि ती वस्तुलाई चाहेर पनि निकाल्न सकिन्न । औषधीले केही दुखाई त कम गरे पनि दुखाइ सहनु नै पर्छ । फेरि कति चोटी त समस्या यती बढ्छ कि औषधीहरु पनि “कमजोर” साबित हुन्छन ।
धेरै औषधी खाँदा फेरि समस्या हुन्छन् । औषधीहरुले सधैं रोगहरु निको पार्दा हुन त, अमेरिकामा त धेरै जनाको अनेक रोगहरु निको भइसक्यो होला । तर वास्तवमा त्यस्तो हुँदैन । फेरि दुखाई कम गर्ने कतिपपय औषधीहरुको धेरै प्रयोग गर्दा त्यसले मृगौलामा नै समस्या पार्छ भनेर सिद्ध भइसकेको छ । तैपनि “बरु पछि जे होला , देखा जाएगा , अहिले त आनन्द सँग खाउँ, मरेर जाने चोला त हो नि, किन पिर गर्नु”? भन्ने जस्ता तर्क दिएर कतिजनाले खाइरहन्छन् ।
(डा. उप्रेती नेपाल सरकारकी पूर्वसचिव हुन् । )
डा. रवीन्द्र पाण्डे भन्छन् - १५ दिन कडा लकडाउन वा कर्फ्युको बिकल्प छैन
सुतेकै ठाउँमा हात्तीले लियो रेग्मीको ज्यान, स्थानीय त्रसित
घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिएर आमाछोराको ज्यान गयो, छोरीहरु भागेर बाच्न सफल
नेपालमा २३ वर्षीय युवकको कोरोनाबाट मृत्यु
भारतमा भयावह बन्दै कोरोना, एकैदिन ६२ हजार बढीमा संक्रमण